Ads : zonke iimeta zakho kwi-1 App | Ukukhuphela mahala
kwiz- wakho Digital Marketing kwindawo enye.
Clever Ads Mobile App ngokusisiseko ngumphathi wentengiso kwishishini lakho. Iya kukuvumela ukuba ujonge kwaye ulawule imikhankaso yakho yentengiso ekwi-Intanethi Google Ads , iiNtengiso ze-Instagram, iiNtengiso zikaMicrosoft kunye neeNtengiso zeTwitter. Fumana ingxelo engama-360º ngokusebenza kwephulo lakho. Yeka ukutsiba ukusuka kwelinye iqonga ukuya kwelinye, fumana uthelekiso olupheleleyo kwifowuni yakho. Ulawulo lweentengiso njengokuba ungazange walubona ngaphambili!
Jonga Google Ads zentsebenzo kaGoogle kunye nokuziphucula!
Yakho yasekuhlaleni ads kwiz- intsebenzo zombini amaqonga!
Jonga Ads zikaMicrosoft kwaye uyiphucule!
Buka yakho Twitter ads amaphulo.
Track ukusebenza amaqonga akho lokuthengisa digital
iziphumo Iimpawu Zokulinganisela Indlela esekelwe amaphulo ezidlulileyo.
Sebenzisa amacebiso ezenziwe ukuphucula iziphumo zakho phulo.
Ediniwe kokuba ukusuka komgangatho omnye komnye?
Jonga onke amaphulo akho entengiso yedijithali netekhnoloji yethu ekhokelayo, kuphela okanye ngokuthelekisa ipaneli yeqonga. Ukukhupha konke ukuqonda kunye neengcebiso zakho ezenziwe ngabantu ukufikelela ngokupheleleyo. Ads ngokusemandleni alo!
Yintoni abaxhasi bethu bathi
"Ukuthelekisa ngokukhawuleza kweemikhankaso ads Ndifumana konke ukutya okufunekayo ukuze ndiqonde ngokucacileyo ukuba amaphulo am aqhuba njani. Oku ngokungathandabuzekiyo engcono ads umphathi kwendakha wazama!"
"Ndisebenza on the go, ngoko le app wenze uhlalutyo iphulo kunye uthelekiso super kakuhle ingako kobuxhakaxhaka. Akukho kugawulwa zibe akhawunti ezahlukeneyo ukukhangela!"
Google Ads Ingcali
"Ilula ukuyisebenzisa! Ndongeze iiNtengiso zam Google Ads iiakhawunti kwaye ngoku ndiyazi ukuba yeyiphi imikhankaso eqhuba ngcono kunye nokuguqula imali ibe yimali. Iimetri ziyamangalisa!"
Okungakumbi malunga noMphathi Clever Ads
Lawula, ulungiselele kwaye wenze Google Ads , iiNtengiso zikaMicrosoft, iiNtengiso ze-Instagram, kunye neeNtengiso zeTwitter ekuhambeni.
OKO kunyusela kuwe & ISHISHINI LAKHO
Iinzuzo, amathuba kunye neempawu eziphambili
Ngaba udikwe kukutsiba ukusuka kwelinye iqonga lentengiso ukuya kwelinye ukujonga nokuhlalutya idatha yakho? Lawula yakho Google Ads , Facebook Iintengiso, Microsoft Iintengiso, Instagram Iintengiso, kunye Twitter Iintengiso kwiz- zonke kwelinye placeIt ayikwazanga kube lula! Ngale ndlela, unokuhlala ulawula izicwangciso zakho zentengiso kwaye ulinganise ngcono iziphumo zakho ngokuba nazo zonke iimitha zemikhankaso yakho kwifowuni yakho okanye isixhobo osithandayo, kwithebhu enye.
Clever Ads sesona simahla (ewe, ufundile ngokuchanekileyo, simahla) intengiso yentengiso Google Ads , iiNtengiso ze-Instagram, iiNtengiso zeTwitter, kunye neeNtengiso zikaMicrosoft. Yenza, ulungiselele, kwaye "ucofe" uninzi lweemikhankaso zakho zentengiso kwi-Intanethi ekuhambeni Clever Ads noMlawuli weNtengiso weClever. Fumana uphicotho-zincwadi lwe-360 ° ekusebenzeni nasekuziveleni kwamaphulo akho ukubonisa ukuba ziqhuba njani iintengiso zakho ngokuthelekisa iqonga elipheleleyo. Yonke idatha yakho, kwideshibhodi enye, naphi na apho ufuna khona, nangona ufuna njalo. Ngaba ingangcono?
nina iimpawu ezingundoqo uya kufumana
Check your main metrics (spend, revenue, conversions and CPA, among others) on all advertising platforms where you are present: Google, Facebook, Microsoft, Instagram and Twitter, and be able to compare them easily. Have all your ad data and KPIs organized in fully customizable charts and graphs , ukhetha into ofuna ukuyibona, nanini na, naphi na. Fumana umbono opheleleyo ngokusebenza kwemikhankaso yakho yentengiso ngokukhangela ngaphandle kokushiya indawo enye.
Ukudalwa kweakhawunti Google Ads : Yintoni leyo? Awunayo Google Ads okwangoku? Akukho ngxaki, siza kuyakhela ngenxa yokunqakraza (ewe, simahla). Kwaye siza isebenze Google Ads ikhowudi sokunyusa ukuba uqale iintengiso kwi Googlefor free! Ukuya kuthi ga kwi-120 yeedola Google Ads !
Umakhi Google Ads likaGoogle: Njengokuba besesitshilo, siyakukhathalela ukwenza Google Ads kunye nokubonisa imikhankaso ngamanyathelo ama-4 alula ukuze uqale ukubhengeza kuGoogle ngokuqhwanyaza kweliso.
Google Ads kunye nesimulator yohlahlo-lwabiwo mali : Ngaba awuqinisekanga ukuba ufuna ukuqala intengiso? Fumana ukuba kungakubiza malini ukufikelela kubaphulaphuli ojolise kubo ngentengiso zikaGoogle kwaye wenze isigqibo esifanelekileyo.
Ukuphucula Google Ads , iiNtengiso ze-Instagram kunye neeNtengiso zeMicrosoft customized tips and tricks zokuphucula ukusebenza kunye nokusebenza kweentengiso zakho. Oyena Mlawuli weentengiso ubalaseleyo kolu shishino, simahla, kwaye buqu.
BEST IZENZO sincoma
Clever Ads kuMphathi weNtengiso weClever?
Google Ads yoMphathi weNtengiso kaGoogle inokuba liphulo lakho elitsha lentengiso kwi-Intanethi kunye neqabane lentengiso. Qhagamshela amaqonga eentengiso ezininzi njengoko ufuna ukubonakala ngokupheleleyo kuthengiso lwakho kunye nesicwangciso sentengiso yedijithali: Google Ads , iiNtengiso ze-Instagram, iiNtengiso zeTwitter, kunye neMikhankaso yeNtengiso yeMicrosoft zonke ziphantsi kwethebhu enye, zilawulwa ngokupheleleyo kwideshibhodi ebhalwe ngokupheleleyo . Kwaye khumbula, SIMAHLA!
Thelekisa intsebenzo yakho phakathi kwamaqonga eentengiso ahlukeneyo kunye balance your budget and spend based on your campaign performance . Ngaba Google Ads zifumana uguquko ngakumbi kuneeNtengiso zikaFacebook? Ngaba iiNtengiso ze-Instagram zinika ingxelo yeCPA ephezulu kuneentengiso zikaMicrosoft? Ngawaphi amaphulo aqhuba ngcono ukubanikezela? Ngaba kufuneka ndiyeke nayiphi na ngenxa yokuba ingaqhubi kakuhle?
Khulisa iqhinga lakho kunye nentengiso ngokwakha Google Ads kunye nemikhankaso engekhoyo kunye neengcebiso zethu kunye neetshathi. Fumanisa abaphulaphuli abatsha kunye nabathengi abanokubakho ongakhange ubacinge kwaye ufikelele kubo nge-Intanethi, ngoncedo lwethu akuyi kuba nzima kangako. Ukongeza, thatha ithuba lezilumkiso zethu kwaye ungaphuthelwa nantoni na eyenzekayo kwimikhankaso yakho nakwiintengiso. Ngalezi zilumkiso uya kuba neliso kuzo zonke iziganeko ezingalindelekanga, kwaye ukuba kukho into engaqhelekanga eyenzekayo kumaphulo akho ... Izilumkiso zethu ziya kukuxwayisa!
Gcina imikhankaso yakho yentengiso ihlaziywa kwaye ihlaziyiwe ngokusebenzisa iingcebiso kunye neengcebiso Ads . Kuphephe ukuchitha uhlahlo-lwabiwo mali., Gcina ixesha kunye nemali kwaye ufumane uxolo lwengqondo.
Ads : senza amaphulo akho SIMAHLA
Awunayo iakhawunti Google Ads Awazi ukuba uqale ngaphi? Ukuba unokuthandabuza kolu hlobo kwaye / okanye uhlahlo-lwabiwo mali lilinganiselwe ... Umphathi wethu weeNtengiso kunye nezinye izixhobo zenzelwe wena, jonga nje! Sifuna ukukunceda ngobuchule bethu kwimikhankaso kaGoogle, siyile kwaye siyilungiselele (simahla) kuwe.
Ngoncedo lwethu unokuba nemikhankaso Google Ads Clever Ads Manager ngokuzenzekelayo kwaye ithobele yonke imigangatho kaGoogle. Yiya nje kwinkqubo yamanyathelo ama-4 apho siza kukubuza imibuzo embalwa: ishishini lakho, iakhawunti yakho, ulwazi malunga nabaphulaphuli ojolise kubo, izibonelelo zakho, iinkonzo kunye nohlahlo-lwabiwo mali lwemihla ofuna ukulichitha kwiintengiso zakho ... hamba!
Umakhi wethu wentengiso ukhululekile kwi-100% kwaye uhlahlo-lwabiwo mali olukhethileyo luya kuchitheka ngokupheleleyo kunqakrazo olufumanayo ekuboniseni ads zakho kuGoogle, asigcini nepeni. Ukongeza, ukuba umtsha Google Ads nesaphulelo sokuqala se-120 yeedola (kuxhomekeke kwimali yelizwe lakho) ezakusebenza njengekhowudi yentengiso kwiakhawunti yakho ukuze uqalise ukuthengisa kuGoogle simahla. Akukho maqhinga kwaye i-100% ikhuselekile! SiliQabane leNkulumbuso kuGoogle, ke ngekhe ubenexhala nangantoni na, siyathembisa. Kwaye ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye inkxalabo, ungasoloko uqhagamshelana nathi kunye Google Ads (abaphathi beakhawunti yethu) bayakuvuyela ukukunceda kwaye bakuncede ngayo yonke into oyifunayo.
Yenza imikhankaso Google Ads Clever Ads Manager ngokuzenzekelayo. Uya kudlula kwinkqubo yamanyathelo ama-3 apho siza kukubuza malunga nabaphulaphuli ofuna ukujolisa kubo, umnikelo wakho, iinkonzo, kunye nohlahlo-lwabiwo mali lwemihla ngemihla ofuna ukulichitha kwiintengiso zakho.
ads wethu wentengiso ukhululekile kwi-100% kwaye uhlahlo-lwabiwo mali lwakho oluchongiweyo luya kuchitha ngokupheleleyo kunqakrazo olufumanayo xa ubonakalisa ads zakho kuGoogle. Ukuba umtsha Google Ads , Clever Ads ziya kwenza ikhowudi yokunyusa kwiakhawunti yakho ukuze uqale ukubhengeza kuGoogle simahla.
Clever Ads ikuxelela kanye into engekhoyo okanye engasebenzi kakuhle Google Ads , kwiintengiso ze-Instagram, nakwiintengiso zikaMicrosoft.
Uyakufumana iingcebiso ezilungele ukusetyenziswa kwinto ekufuneka uyenzile ukuphucula ukusebenza kwakho kumaqonga ahlukeneyo entengiso. Clever Ads ikunceda ukonyusa ukusebenza kwakho ngonqakrazo olunye.
Gain ulawulo kunye nokwandisa iziphumo.
Lawula amaphulo akho nge- Clever Ads Mobile App yasimahla! Yifake ngoku i-Android kunye ne-iOS.